Archive du 20190709
Fihetseham-po tamin’ny Barea Olona 6 namoy ny ainy…
amam-bahona tokoa ny fiainana satria nisy fiantraikany tsara sy toe-javatra somary nanamaloka azy ny fiatrehantsika ny fiadiana izay tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra na ny CAN 2019 tanterahina any Egipta.
Fifidianana kaominaly « Asakasak’izay hilatsaka »
Raha mba ohatry ny baolina kitra ny fandrosoan’ny firenentsika, hoy ny filohan’ny antoko politika Teza, Jean Louis Rakotoamboa,
Fiara-mitantana ny nosy Eparsa Misy misitery
Efa nanambara ny avy eo anivon’ny firenena mikambana fa mila hajaina ny fiandrianan’ireo firenena voazanaka fahiny efa nomena fahaleovantena.
Raharaham-pirenena Miharatsy ny fifandraisan-dRajoelina sy ny Polisy
Tambin-karama tamin’ny fitandroana filaminana na « indemnité de sécurisation » tamin'ny 26 jona teo 10 000Ar isan’olona ho an’ny polisy miisa 500 no tsy nomena, raha ny vaovao azo.
Fitantanana ny firenena Tsy maintsy ovaina ny lalàmpanorenana ?
Hiroso amin’ny fivoriana manokana ireo solombavambahoaka vao voafidy ny talata 16 jolay izao. Ny IRD rahateo no mitarika ny fahazoana maro an’isa eny anivon`ity andrim-panjakana ity.
Miverina indray ny delestazy Manomboka tezitra vahoaka…
Velon-tairaina ny ankamaroan’ny mponina eto an-dRenivohitra sy ny manodidina satria saika isan’andro no hisiana fahatapahan-jiro amin’ny toerana samihafa. Ao anatin’ny fotoana fanarahana ny Lalaon’ny CAN 2019 anefa isika,
Harena sy vola azo tamin’ny tsy ara-dalàna Neken’ny HCC ho manan-kery sy ampiharina
Nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny didy hitsivolana lah. 2019-015 momba ny fanagiazana ny fananana sy ny vola azo amin’ny fomba tsy ara-dalàna na « recouvrement des avoirs illicites ».
Jeux Corporatifs Ndao eLalao Natao hampivondronana ny orinasa rehetra
Hotanterahina eny amin’ny kianjan’i Mahamasina ny 20 sy 21 jolay ho avy izao ny « jeux corporatifs » Ndao eLalao.
Ampahefa-dalana CAN 2019 Hifandona amin’i Madagasikara i Tonizia
Anisan’ireo ekipa goavana nihintsana ihany koa omaly ny Blackstars an’i Ghana resin’i Tonizia tamin’ny alalan’ny “Tirs au but” 5 – 4 rehefa nanao ady sahala 1-1 ny roa tonta tao anatin’ny 90 minitra sy taorian’ny fanalavam-potoana.
Andry Rajoelina “Fiaramanidina roa no hoentina amin’ny manaraka”
Misaotra an’ireo mpilalaon’ny Barea manokana sy ny mpanazatrany aho amin’izao nahatafakaran’izy ireo amin’ny lalaon’ny 1/4-dalan’ny fifaninanana CAN 2019 tontosaina aty Egypte izao, hoy ny Filoham-pirenena Malagasy Andrinirina Rajoelina omaly tany amin’ny kianjan’Alexandria any Egypte.
Federasiona Malagasin’ny Volley-ball Tohizana indray ny fikarakarana ny « Coll volley »
Rehefa najanona nandritra ny fotoana naharitra dia tohizan’ny FMVB “Federasiona Malagasin’ny taranja Volley-ball”
Atletisme Rodorodon’Alaotra andiany voalohany I Hervé Patrick no nahery teo amin’ny Open 10 km
Fahombiazana tanteraka no azo hilazana ny hetsika Atletisma Rodorodon’Alaotra andiany voalohany nokarakarain’ny ligin’ny Atletisma any Alaotra Mangoro teo ambany fiahian’ny FMA
Edito Nipoitra daholo !
Nipoitra daholo ankehitriny fa hay misy fitiavan-tanindrazana natory ihany tao anatin’ny malagasy tao. Heverina fa mendrika ny hisaorana indrindra noho izany ireo izay namoha azy io.
Fanadinana CEPE andrana Hozaraina amin’ny herinandro ny laza adina
Efa miomana tanteraka amin’ny fiatrehana ny fanadinana CEPE andrana andiany faharoa ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana eto an-drenivohitra ankehitriny.
Amnesty International Nanakiana ny mpitandro filaminana Malagasy
Nanao fanambarana indray ny Amnesty International ary nilaza fa ilaina ny ezaka
British Airways Voasazy nandoa onitra 204 tapitrisa euros
Taorian`ny famoahana vaovao manokana momba an`ireo mpanjifany ny taona 2018 dia nivoaka ny sazy ho an`ny kaompania ana habakabaka, Britsih Airways (IAG).
Iran Nandrenesana horohorontany indray
Nandrenesana horohorontany 5.6 amin’ny maridrefy Richter indray tany atsimo andrefan'i Iran omaly.
Praiminisitra vaovao ao Grèce Tsara toerana i Mitsotakis
Nanjakan`ny antoko “Nouvelle democratie” ny fifidianana solombavambahoaka ka nitarika lavitra manoloana ny praiminisitra grika Alexis Tsipras ny 07 jolay 2019.
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Hametraka paikady maharitra ny ONN-PAM-KOICA
Nisy ny fitsidihina ireo toby fanaraha-maso momba ny fanjarian-tsakafo tany Atsimon’ny Nosy, izay notanterahin’ny delegasion’ny repoblikan’ny Korea eto Madagasikara sy matihanina avy ao amin’ny PAM ny 1 hatramin’ny 5 jolay lasa teo.
Mpianatra malagasy any Maraoka Miantso vonjy, fa mbola tsy nandray vatsim-pianarana
Manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana izahay mpianatra aty Maraoka. Antony, nohon'ny tsy mbola naharaisanay ny vatsy "allocation 2017-2018”, izay vola, voalaza fa efa nivoaka ny volana janoary 2019, saingy tsy mbola tonga any amin’izy ireo amin’izao,
JAONA ELITE Halevina rahampitso eny Ankatso
Halevina rahampitso alarobia 10 jolay eny amin’ny fasan-drazany eny Ankatso ny nofo mangatsiakan-dRandriarimalala Harijaona, fantatry ny maro amin’ny anarana Jaona Elite.
Jirama Antananarivo Renivohitra Hotohizana ny fampiakarana ny tanjaky ny herinaratra
Tsy mandritra ity CAN 2019 ity ihany no hiezaka hampitombo ny tanjaky ny herinaratra amin’ireo faritra maro eto an-drenivohitra ny orinasa JIRAMA, raha araka ny fanazavana azo.
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Izaràna pilifera ny mpianatry ny EPP
Tanjon’ny drafitrasa nasionaly ho an’ny fanjarian-tsakafo andiany fahatelo (PNAN 3) ny hampihena ho 38% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto amintsika, hatramin’ny taona 2021.
Soalihy Moussa “Efa tena tsara ny ezaka nataon’ny Barea…”
Efa tena tsara ny ezaka ny nataon’ny ekipam-pirenena Barea, raha araka ny fanazavan’Atoa Soalihy Moussa omaly, sekretera jeneralin’ny “Cercle de reflexion musulmane”.
Sinto-mahery 67ha Mpangarom-paosy nifanenjehan’ny polisy ka tratra
Nampiaiky ny tany ama-monina sy ny mpandalo teny amin’ny faritra 67ha ny fifanenjehana teo amin’ireo mpitandro filaminana sy ny mpanendaka.
Tsenan’Andravoahangy Tsy mifankahazo ny mpivarotra sasany sy ny delege
Mitaraina vokatry ny fakana volabe ataon’ireo delegen’ny tsena sy ny lehiben’ny tsenan’Andravoahangy, ireo mpivarotra mivondrona ao anatin’ny fikambanana FI.MPI.E.A na Fikambanan’ny Mpivarotra Etale Andravoahangy.
Lozam-pifamoivoizana Anjozorobe Vaky ny lohan’ilay mpitondra moto cross
Samy naratra ireo mpitondra cross roa nifanehitra ary ny iray aza tsy tana ny ainy. Vaky mantsy ny lohan’ity farany, nentina nihazo ny hopitalin’ny distrika na CHD Anjozorobe,
Anosibe sy Andavamamba Tra-tehaka ny mpamaky trano sy fiangonana
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahadimy ny tovolahy iray vao 19 taona voarohirohy fa mpamaky trano sy tamin’ny famakiana fiangonana, ny talata 2 Jolay teo tokony ho tamin’ny 8ora maraina tamin’iny faritra Andavamamba iny.
Fanarahana ny lalao CAN tao Vondrozo Tapaka ny jiro, raikitra ny torabato
Tezitra ny mponina ary nisafoaka, ka nirohotra nankeny amin’ny biraon’ny jirama tao amin’ny distrikan’i Vondrozo, faritra Vatovavy Fitovinany, ka nitorabato tsy nifandrenesana tao amin’io birao io.